अनमोलको स्टाइल, स्टारडम र अभिनय | Rajatpatonline Nepal's No. 1 Films News Portal
अनमोलको स्टाइल, स्टारडम र अभिनय
अभिनेता अनमोल केसि यतिबेलाका अरु नायकहरुको भन्दा बढी स्टारडम भएका नायक हुन्। हुन त कोरोनाले फिल्म क्षेत्रलाई लम्पसार नै पारेको छ। यो समयमा स्टारडमको कुरा खासै सान्दर्भिक नहोला। तर, यस्तो बेलामा पनि अनमोलले आफ्नो स्टारडमलाई जोगाएर राखेका छन्। उनी कहिल्यै बिचलित भएको देखिदैन। उनी फिल्ममै मात्र फोकस छन्। अरु नायकहरुले जसरी जता पनि हात हाल्दैनन् अनमोल। केही ठुला ब्रान्डहरुको एम्ब्यासडर पनि छन् अनमोल। अनमोल एम्ब्यासडर बन्दा पनि ब्रान्ड छानेर मात्र गर्छन् अरे।
प्राय रिजर्भ बस्ने अनमोल आफ्नो स्टाइलमा पनि ध्यान दिन्छन्। अरु भन्दा स्टाइलिस पनि छन् अनमोल। उनको सामाजिक संजालका तस्विरहरुले पनि उनी स्टाइलिस छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ। तर, जतिसुकै भनेपनी दर्शकहरु अनमोललाई मेगास्टार भन्न भने रुचाउँदैनन्। स्टार त अनमोल नै हुन्। अरु स्टार जस्तो दिउसै उदाउँदैनन् अनमोल। उनी रातमा मात्र उदाउँछन्। यानकी उनलाई फिल्ममा मात्र देख्न पाइन्छ। म्युजिक भिडियो खेलेर स्टारहरुले स्टारडम गुमाए भन्ने गसिप चलिरहदा अनमोल त्यो कुराबाट पर छन्।
अनमोलको स्टाइल र स्टारडमको बेला बेला चर्चा भैरहन्छ। भुवन केसिको छोरा भएकै कारण चर्चित भएको चर्चा र गसिप पनि हुने गर्छ। जे भए पनि अनमोलको एक प्रकारको क्रेज भने छ। नयाँ पुस्ताको नयाँ हीरो भन्न वित्तिकै आउने नाम भनेकै अनमोल केसि हो।
यता अनमोललाई लिएर फिल्म बनाउन चाहानेको लर्को झन् लामो छ। अनमोलको सुन्दरतामा लठ्ठ हुने युवतिहरुको लाइन त झन् कति हो कति। महँगो पारिश्रमिक पनि तिर्न तयार हुन्छन् निर्माता। तर, मान्दैनन् अनमोल। अनमोल राम्रो टिमसँग मात्र काम गर्न तयार हुन्छन् रे। अनमोलले कथा भन्दा पनि टिम हेर्ने गरेको हल्ला फिल्मी बजारमा चलिरहेकै हुन्छ। दुबै चीज राम्रो भए त झन् मज्जा। जे होस्, अभिनय गर्न नजान्ने ह्याण्डसम हीरो भनेर पनि चिनिन्छन् अनमोल। सर्वगुण सम्पन्न त को नै हुन्छ र ?
अनमोलका केही स्टाइलिस तस्बिर :- तस्बिर : अनमोलको फेसबूक
Previous articleअभिनेत्रीहरुको युट्युब मोह
Next articleम्युजिक भिडियोमा टिकटकर हावी
१५ बैशाख २०७८, बुधबार ०४:०५
सुजन श्रेष्ठ - १५ बैशाख २०७८, बुधबार ०४:०५